हाम्रो पुरुषार्थ अंक ९3
होली आउँछ प्रत्येक वर्ष नूतन सृजनसँगै प्रकृतिमा । कतै रंग जमेर आउँछ । गुराँससँगै फुल्छ रंगिलो फागुन । कोइलीसँगै बोल्छ सुमधुर फागुन । रसरंग र उमंग छन् फागुमा । हाम्रोमा होली कतै समुद्रपारिबाट आउँछ । कतै समुद्रवारिबाट आउँछ । नानाचाचा भएर आउँछ । सँगसँगै बसेर होली मनाउने कहिले होला ?
हाम्रो भौगोलिक इतिहास
-भुसाल–वंश, अर्घा र त्यसका छिमेकी राज्यहरूको सङ्क्षिप्त इतिवृत्त
हाम्रो साँस्कृतिक ग्रन्थ शिवमहापुराण शिवमहापुराणशिवमहापुराण शिवमहापुराणशिवमहापुराण अनुसार यस ब्रह्माण्डमा सर्वप्रथम भगवान् सदाशिव र उहाँबाटै अष्टभूजा पराशक्ति जगदम्बिकाको उत्पत्ति भएको थियो । पौराणिक साहित्यमा भगवान् शिव स्वयम्भू अर्थात् अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण तथा निर्विकार हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै विष्णु तथा ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको भनिन्छ । जे भए तापनि, यस ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर (शिव) हुनुहुन्छ ।
यहींबाट छरिएथ्यो एउटा ज्योति टाढाटाढासम्म । युगयुग ननिभेर त्यसले बाटो देखाउनेछ सबैलाई । त्याग, तप, सत्य, शान्ति र करुणाको त्यो मृत्युञ्जय ज्योतिलाई सादर नमन । बुद्ध एउटा विचार हो । बुद्ध एउटा आचार हो । बुद्ध शान्ति हो । बुद्ध क्षमा हो । बुद्ध शील हो । बुद्ध प्रज्ञा हो । बुद्ध आनन्द हो । राजगद्दी छोडेर भिक्षुक बनेको एउटा त्यागमूर्ति । मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाका भावनाहरुबाट उद्दीप्त एउटा करुणामूर्ति ।
हाम्रो पुरुषार्थ अंक ८९
-पं. भीमकान्त पन्थी शतवार्षिक–स्मृति–विशेषाङ्क
सबै विद्वान् हुँदैनन् । विद्वान्हरू पनि सबै प्रतिभाशाली हुँदैनन् । कति प्रतिभाशालीहरू लेख्ने जाँगर गर्दैनन् । विद्वत्ता, प्रतिभा र जाँगर तीनै जुट्ने महानुभावहरू दुर्लभ छन् । यस्तै दुर्लभ मध्येका प्रतिभा हुन् महाकवि भीमकान्त पन्थी ।
-Political Economy of Brihaspati School of Thought
स्वच्छन्दतावादको एउटा दियो निभेको छ, नेपाली साहित्यको आकाशबाट एउटा उज्यालो तारा अस्ताएको छ, राष्ट्रप्रेमको एउटा अटूट वाणी अवरुद्ध भएको छ । हामी दुःखी भयौं–अपूरणीय क्षतिमा । हामी शोकाकुल भयौं–राष्ट्रकविको वियोगमा ।
याद आएर तिम्रो तस्वीर छानेर हेरें आँखा मानेन फेरि पर्दा तानेर हेरें आयो भरिदै माया मनभरि झन्झन् सुन्न कोकिल बोली फोन हानेर हेरें
हाम्रो पुरुषार्थ अंक ८६
-कवि प्रयासी स्मृति-अंक
संसारमा माटोभन्दा पानी धेरै ह कि ? सकेसम्म आ ँसुलाई संगालेर हो कि ? – भान
‘अमृतपान’ साना साना प्रबन्धहरुको सङ्ग्रह हो । यसमा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद् आदिमा वर्णित विषयहरुकै सारसंक्षेपलाई सरल नेपाली भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ । बुझ्नलाई सजिलो, पढ्नलाई मिठो जीवनका लागि अति उपयोगी कुराहरु यसमा रहेका छन् । त्यसैले यो कृति राम्रोसँग अध्ययन र मनन गरेपछि अमृतपानको अनुभव हुन्छ । विभिन्न विषयका घतलाग्दा कुराहरु यस कृतिमा रहेका छन् । तीमध्ये एउटा ‘अमृतपान’ हो ।
कोरोनाको कालसर्पले फैलाएको विषले अहिले संसारलाई जलाइरहेछ । प्राचीन कालमा कालकूट जस्ता विषहरु निस्केर संसारलाई पिरोलेका थिए । लोककल्याणार्थ शिवले पिएथे कालकूट नीलकण्ठ बनेर । हामी नीलकण्ठको धाममा छौं । जगत्को रक्षा गर नीलकण्ठ !
-महाकवि देवकोटाप्रति श्रद्धाञ्जलि
-भानु चम्काउने मोती
-राष्ट्र, भाषा र साहित्य
-आगो निभाउन अलिकति पानी
केराका पातहरु पिपलका पातजस्ता हुँदैनन् । गुलाफका फूलहरुको रुप, रंग र गन्ध पारिजातका फूलको जस्तो हुँदैन । प्रत्येक कलाको उचाइ अनुपम हुन्छ |आकाश आकाशजस्तै हुन्छ । व्यक्तिका अनुभूतिहरु फरक–फरक हुन्छन् । अर्काको अनुभव म जान्दिनँ । सहानुभूति स्वाङ्मात्र हुन्छ । प्रत्येक स्वतन्त्र लेखाइमा व्यक्तिका निजी अनुभूतिहरुको नूतन रुपको झझल्को हुन्छ । एउटा कल्पनाशील मन हुनुपर्छ चंगा झैं । मुक्त हुनुपर्छ–ढोंग आडम्बर, लोकाचारबाट । आत्माको अभिव्यञ्जना निबन्ध बनेर बग्नेछ त्यहाँ ।
-पृथ्वी तात्दै छ
हिजो विकास थिएन, विनाश पनि थिएन । आज विकाससंगै विनाश पनि आएको छ । विकासको अर्थ हो – प्रसन्नता, प्रफुल्लता । मान्छे प्रसन्न हुनसक्ने वातावरण बनेमा विकास भएको हुन्छ । आज हामीसँग माता धरणी क्रुद्ध छन् । आज हामीसँग वायुदेवता र जलदेवता क्रुद्ध छन् । देवता रिसाएपछि आज हामी खिन्न छौं, त्रस्त छौं । आज पृथ्वी, वायु, जल, आकाश प्रदूषित बनेका छन् । तिनको आधारमा जीवन धारण गर्ने सबै पीडा र सन्त्रासमा छन ।
-किरण पुस्तकालयको स्वर्णवर्ष विशेषांक
-कागजी पुस्ताका लागी ...
-पुस्तक र पुस्तकालय
अजरामर हुन्छन् अक्षरहरू । हामी मान्छे बन्छौं अक्षरबाट । अक्षरले हामी सभ्य भयौं, नैतिक भयौं, ज्ञानी भयौं । हाम्रा ज्ञानहरू अक्षरबाट बगेका छन् स्वर्ग·ा झैं । हाम्रा शरीरहरू क्षर छन् । हाम्रा कृतिहरू अक्षर छन् । हाम्रा ज्ञान, कला, प्रविधि अक्षर छन् । संसारमा सर्दै जानेछन् ती पुस्तापुस्तासम्म अक्षरमा ।